"Qorshaha 14-aad ee Shanta Sano" ayaa bilaabmaya, Fuzhou wuxuu dardar gelinayaa dhismaha "magaalada" - Shiinaha Foshan Hermes Steel
"Qorshaha 14-aad ee Shanta Sano" ayaa bilaabmaya, Fuzhou wuxuu dardar gelinayaa dhismaha "magaalada"
Toddobaad ka hor, 21 mashruuc oo ku yaal aagga dekedda Luoyuan Bay ee "Silk Road Seaport City" ee magaalada Fuzhou ayaa la saxeexay, iyada oo wadar ahaan maalgashi dhan 35.4 bilyan yuan (RMB, isla hoos ku qoran). Kuwaas waxaa ka mid ah, dhamaadka-sare ee birta ah mashruuc cusub oo saldhig maado cusub ay maal-gelisay oo ay dhistay Shiinaha Baowu Taiyuan Iron iyo Steel (Group) Co., Ltd., iyadoo wadar ahaan maalgashi dhan 10 bilyan yuan, lagu dhisi doono 3.22 milyan oo tan oo alaabooyin boutique ah. Luoyuan Bay iyadoo lagu saleynayo miisaanka jira ee Baosteel Desheng. Waxyaabaha birta aan lahayn.
Saraakiisha maxalliga ah ayaa u sheegay wariyeyaasha Wakaaladda Wararka Shiinaha 8-dii in qandaraaskan dhexe uu dardar-gelin doono kor u qaadista warshadaha birta ee Luoyuan Bay isla markaana uu dardar-gelin doono kor-u-qaadka "Silk Road Seaport City" si loo dhiso xarun caalami ah oo ka samaysan birta biraha ahaanta leh.
Si tartiib tartiib ah u soo kacaya "Magaalada Xariirta Wadada Xariirta Wadada" ee ku taal Fuzhou waa shey yar oo ka mid ah dhismaha Fuzhou ee dardargelinta "magaalo". Ka dib markii uu soo galay "GDP ka badan hal trillion yuan club" markii ugu horeysay, Fuzhou wuxuu sii waday inuu horumariyo xawaare, isagoo sameynaya dadaal kasta oo lagu riixayo "tiirarka koritaanka", la dhiso xarun "Haisi", oo lagu dadaalo in la noqdo magaalo qaran oo qaran.
Qorshaha “14aad ee Shanta Sano” ayaa bilaabmay. Fuzhou waxay cadeysay in shanta sano ee soo socota, ay diirada saari doonto dhismaha lix "magaalo" sida Fuzhou Binhai New City, Fuzhou University City, Southeast Auto City, Silk Road Seaport City, Fuzhou (Changle) International Aviation City , iyo Magaalada Magaalada ee Saadka. Waxay ku dhawaaqday "wicitaankii shirkii" si loo dedejiyo dhismaha magaalo casri ah oo caalami ah.
Sida uu qorshuhu yahay, “bartilmaameedyada adag” ee loogu talagalay horumarka Fuzhou inta lagu gudajiray “14-kii Shanaad ee Qorshaha” muddada ayaa ah: gaaritaanka koror cusub oo ku saabsan heerka tamarta caasimada gobolka, iyadoo lagu dadaalayo in la ilaaliyo celceliska kobaca sanadlaha ah ee 7% ee GDP, aag la dhisay oo qiyaastii ah 500 kiiloomitir oo laba jibbaaran, iyo dad deggan magaalo joogto ah oo gaaraya 500 Toban kun oo qof, mudnaanta caasimadda gobolka iyo shucaaca shucaaca ayaa si weyn kor ugu kacay.
Huang Maoxing, oo ah hormuudka Iskuulka Dhaqaalaha ee Jaamacadda Fujian Normal, wuxuu rumeysan yahay in dhismaha lix magaalo oo casri ah ay dhiiro gelin joogto ah u noqon doonto kobaca xawaaraha sare iyo sare ee Fuzhou.
Bilowga sanadka cusub, dhismaha lix magaalo oo casri ah oo ku yaal Fuzhou ayaa si buuxda shaqada looga joojiyey. Magaalada Koofur-bari Auto oo ku taal Gobolka Minhou, Fuzhou City, Mashruuca ballaarinta iyo dib-u-dhiska Wadada weyn ee 203 ee Gobolka, Mashruuca Beerta Warshadaha ee Lanpu, iyo mashruuca Wax-soo-saarka Cusub ee Wax-soo-saarka Cusub ee Dongtai ayaa dardar-gelinaya. Ye Renyou, xoghayaha Guddiga Xisbiga Gobolka ee Minhou, wuxuu tilmaamay in ururinta koox mashaariic waaweyn oo wanaagsan oo lagu taageerayo gawaarida ay hirgelin doonaan silsilad adag oo lagu kabo warshadaha baabuurta, sii ballaarinta iyo xoojinta warshadaha baabuurta, iyo dadaal kasta oo lagu dhisayo magaalo baabuur koonfur-bari leh horumar isku dhafan oo dadka, warshadaha iyo magaalada.
Magaalada Binhai ee Magaalada Fuzhou, Fujian Berry Hekang Digital Life Industrial Park (Wajiga II) mashruuca ayaa dhowaan la bilaabay, iyadoo wadar ahaan maalgashi dhan 1.678 bilyan yuan, diiradda lagu saarayo xisaabinta daruuriga, isku xigxigga hidde-wadaha, tafatirka hidaha, sirdoonka macmalka ah iyo teknolojiyada kale ee teknolojiyada sare. in la dhiso xarun xogta iyo Saldhig wax soo saar, R&D center, iyo hawlo kale oo badan oo shaqeynaya, nolol maalmeed buuxa iyo beeraha warshadaha caafimaadka. Tani waa mid ka mid ah dufcaddii ugu horeysay ee mashaariicda waaweyn ee Gobolka Fujian si ay u bilaabaan dhismaha urursan bilowga ah ee "14-kii Shanta sano ee Qorshaha" muddada.
Dardar galinta dhismaha "magaalo", Fuzhou wuxuu iftiimin doonaa taageerada warshadaha. Wareysiga, Duqa magaalada Fuzhou You Mengjun wuxuu caddeeyay in warshaduhu ay yihiin taageerada ugu muhiimsan ee lagu hormarinayo horumarin tayo sare leh oo dhan walba leh, hal-abuurnimaduna tahay xoogga ugu horreeya ee dhaqaajiya.
Dib u jaleecidda "Qorshaha Shan-iyo-Tobnaad ee Saddex iyo Tobnaad", iyada oo ay ugu wacan tahay koritaanka sii kordhaya ee shanta bilyan ee ugu weyn kooxaha warshadaha sida dharka, kiimikada kiimikada iyo cuntada warshadaha fudud, wadarta waxsoosaarka warshadaha ee Fuzhou ayaa la filayaa inay ka badato 1.1 trillion yuan . Dhanka "Qorshaha 14aad ee Shanta Sano", Fuzhou wuxuu sii wadi doonaa inuu ku dhego "niubi" ee warshadaha oo uusan nasan, caawinaad soo jiito hoggaamiyeyaal waaweyn, beero kooxo waaweyn, iyo horumarinta warshado waaweyn.
Faa'iidooyinka Shiinaha iyo Taiwan ee dibadda ayaa sidoo kale caawimaad weyn u ah Fuzhou si loo dardargeliyo dhismaha "magaalo". Fuzhou waa magaala caan ah oo ka soo jeeda Shiinaha dibedda waana guri muhiim u ah awoowayaasha ay wadaagaan Taiwan. Waxaa jira in ka badan 4 milyan oo dad dibedda ah oo ku nool 177 dal iyo gobollo adduunka ah. Huang Maoxing wuxuu rumeysan yahay in si ballaadhan loo soo ururiyo caqliga iyo xoogga dadka wadaagga ah ee dal iyo dibadba si loogu dadaalo raasamaal dheeraad ah, hibooyin iyo teknolojiyad gudaha iyo dibedda ah oo lagu ururiyo Fuzhou waxay dardargelin doontaa dhismaha lix magaalo oo casri ah oo ay ka mid yihiin Fuzhou Binhai New City, Koonfur-bari Auto City. , iyo Magaalada Xariirta Wadada Xariirta. Kor u qaadka "wareegga laba-geesoodka ah" oo u adeeg qaabka cusub ee horumarka. (Dhameyso)